बाइक सर्भिसिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
धेरैजसो सवारी धनीले सवारीको सर्भिसिङ गराउन सर्भिस सेन्टर अथवा वर्कसपलाई जिम्मा दिन्छन्। तर प्रायःलाई सर्भिसिङमा के-के गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा नहोला। सर्भिसिङ भइसकेपछि पार्टपूर्जा सफा भए-नभएको वा आवश्यक सेवा मिले-नमिलेबारे पनि कमैको चासो हुन्छ। सवारी साधन राम्ररी चले र चिटिक्क देखे भइहाल्यो!
तर हामीले चलाउने सवारी साधनको राम्रो सर्भिसिङ नहुँदा यसको विभिन्न पार्टपूर्जा चाँढै बिग्रने जस्तो समस्या हुन्छ। त्यस्तै, समयमा सर्भिसिङ नगर्दा यो बिग्रने, एउटा समस्याले थप समस्या निम्त्याउने, एक्कासी दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम हुन्छ। सवारी साधन समय-समयमा सर्भिसिङ गरेमा टिकाउपन क्षमता र माइलेज पनि बढ्छ।
नेपालमा दुई पांग्रे सवारी साधन चलाउँनेको बेग्लै जमात छ। यस्तोमा बाइक सर्भिसिङमा दिदाँ अथवा सर्भिसिङ गराइसके पछि के-के कुरा पुनः जाँच गर्ने?
बाइक सर्भिसिङ गर्दा के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
१. मोबिल चेक गर्ने
सर्भिसिङ गर्दा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा मोबिल हो। मोबिल कम भयो भने इन्जिनमा असर पर्छ। सामन्यतया मोटरसाइकल १ हजार देखि १२ सय किलोमिटर गुडेपछि मोबिल फेर्नुपर्छ। लामो समयसम्म मोबिल नफेर्दा इन्जिनमा समस्या आउने र इन्जिनमा आएको समस्याले जोखिम बढ्छ। त्यस्तै, मोबिल हाल्दा पनि गुणस्तरीय मोबिलको छनौट गरेर मात्रै हाल्नुपर्छ। अथवा वर्कसपहरूलाई आफैले कुन मोबिल हाल्ने जानकारी गराउँन सकिन्छ।
२. कार्बोरेटरमा ध्यान दिने
कार्बोरेटरले इन्जिनलाई आवश्यकताअनुसार हावा र इन्धन पुर्‍याउने गर्छ। हावा र इन्धनलाई समूचित रुपमा मिश्रित गर्ने डिभाइस नै कार्बोरेटर हो। मोटरसाइकल कुद्नका लागि यसले इन्जिनलाई शक्ति प्रदान गर्छ। उच्च गतिमा बाइक कुदाउँदा कार्बोरेटर बढी मात्रामा सक्रिय हुन्छ। कहिलेकाहीँ, खासगरी चिसोमा मोटरसाइकल राम्ररी स्टार्ट हुन नसकेको अवस्थामा हामी कार्बोरेटरमाथि जोडिएको ‘चोक’ तानेर स्टार्ट गर्छौं। चोक तानेपछि कार्बोरेटरले बढी शक्ति उत्सर्जन गरि स्टार्ट हुनका लागि मद्दत पुग्छ। उपयुक्त तरिकाले कार्बोरेटरले काम गरे-नगरेको मोटरसाइकलको आवाजबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ।
३. एयर फिल्टर सफा गर्ने
एयर फिल्टरले इन्जिनमा धुलो पस्नबाट रोक्ने काम गर्छ। त्यसैले सर्भिसिङ गर्दा यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। एयर फिल्टर सफा नहुने हो भने धुलो इन्जिनमा पस्छ अनि यसले इन्जिनमा असर देखाउँछ। अन्य प्राविधिक समस्या पनि निम्त्याउँछ। त्यसैले, समय-समयमा एयर फिल्टर पनि फेर्नुपर्छ।
४. ब्रेक र ब्रेक आयल चेक गर्ने
ब्रेक माटरसाइकलको अत्यन्तै जटिल पुर्जा हो। यसमा चालकले निकै ध्यान दिन जरुरी छ। समस्या नआएपनि प्रत्येक पटक सर्भिसिङ गर्दा ब्रेकमा ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। त्यस्तै डिक्स ब्रेकवाला मोटरसाइकल छ भने ब्रेकआयल पनि चेक गर्नुपर्छ। यसो गर्दा ब्रेक नलाग्ने समस्या आउँदैन। ब्रेक धेरै सार्ह्रो र खुकुलो गरेर पनि चलाउँनु हुँदैन।
५. फ्यूल पाइप चेक गर्ने
फ्युल पाइप अर्थात फ्युल लाइन पनि सर्भिसिङका क्रममा चेक गरिन्छ। फ्युल लाइनमा अवरोध आएमा इन्धन चुहिने, इन्धन सर्कुलरमा अवरोध आएर स्टार्ट नहुने वा बीचबीचमा बन्द हुने जस्ता समस्याहरू देखिन्छ। यदी फ्युल पाइप जाम भएको वा प्वाल परेको भए नयाँ नै फेर्नुपर्छ।
यीबाहेक सवारी धनीले अथवा चालकले आफ्नो बाइक सर्भिसिङ सकेपछि यसको टायरको एयर प्रेसर पनि चेक गर्नुपर्छ। खासगरी टायर प्रेसर समय-समयमा चेक गर्नुपर्छ। बाइकलाई कहिल्यै पनि कडा साबनु अथवा अन्य सरफले धुँनु हुँदैन। यसो गर्दा बाइकको चमक जानसक्छ र बाइक छिट्टै पुरानो देख्न सक्छ। त्यसैले यसलाई ‘बाइक स्याम्पू’ले नै धुँदा उपयुक्त हुन्छ। बाइक धुँदा साइलेन्सरमा भने पानी नपर्ने हिसाबमा धुँनु पर्छ।
बाइकको सर्भिसिङ र बाइक धोएपछि यसको बाहिरी भाग जस्तै सिट, ट्यांकी, टायरलगायतमा पोलिस गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा बाइकको चमक बढाउनुका साथै यी पार्जपुर्जाहरूलाई टिकाउन राख्न पनि मद्दत मिल्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ११, २०७८, ०३:५६:००